မီးလောင်သောခြေဘဝါး:5သဘာဝကကုစား - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » သဘာဝကကုစား "ခြေ5သဘာဝကကုစားထွန်းခြင်း - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ
မီးလောင်သောခြေဘဝါး:5သဘာဝကကုစား - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ
Tele RELAY တစ်ခု 30 ဇူလိုင်လ 2019
ယေဘုယျအားဖြင့်, ဒီလက္ခဏာဆီးချို neuropathy ထံမှဆင်းရဲခံရသောလူနာများကိုသာသက်ရောက်သည်။ သို့သော်ဤလက္ခဏာလည်းအာဟာရချို့တဲ့ခြင်းညွှန်ပြနိုင်ပါတယ်အခြားသူတွေအကြားတစ်ဦးကကြွက်သား Overload သို့မဟုတ်ရောဂါကူးစက်။
နောက်ခံအကြောင်းရင်းအဆိုအရအီပျော့သို့မဟုတ်ပြင်းထန်စေနိုင်ပါတယ်။ နှင့်အခြားရောဂါလက္ခဏာတွေခြေဖို့စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းအတူလိုက်ပါစေခြင်းငှါ, အခြားသူတွေအကြား, ထုံသို့မဟုတ်ရောင်ရမ်း tingling ။
အကြှနျုပျတို့သညျငါးသဘာဝကကုစားဆက်ကပ်။ စမ်းသပ်ခြင်း၏ထိုအချိန်က, ကပြဿနာများ၏အမြစ်အကြောင်းမရှိစဉ်းစားရန်အရေးကြီးပါသည်။ သဘာဝကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်, ဒါပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံသည်အခြားကုသမှုလိုအပ်သည်။
အာရုံကိုမီးရှို့ခွနှင့်ဆက်စပ်သောလျှင် ဆီးချို neuropathy, ရောဂါကူးစက်မှုသို့မဟုတ်အာရုံကြောအကျိုးသက်ရောက်စေတဲ့ရောဂါ, ဆရာဝန်တစ်ဦးကိုကြည့်ပါ။
အဆင်မပြေကြွက်သား Overload, စိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်မသင့်လျော်ဖိနပ်များ၏ဆိပ်ကမ်း၏ရလဒ်ပင်ဖြစ်သည်လျှင်မည်သို့ပင်ဆို, သငျသညျပြဿနာများမပါဘဲသဘာဝအလျောက်အခြားနည်းလမ်းကြိုးစားနိုင်ပါ။ မှတ်စုကိုယူသွားပါ!
1 ။ Epsom ဆား
Epsom ဆားနှင့်အတူဗတ်ခြေအတွက်နာကျင်မှုနှင့်မီးလောင်ရာအာရုံမှသက်သာရာရစေရန်သဘာဝကုထုံးဖြစ်ကြသည်။ ယင်း၏အားမစိုက်ရအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ, ဒီကုထုံး, ဦးနှောက်အာရုံကြောကြွက်သားနှင့်သွေးလည်ပတ်မှုပြဿနာများကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အတွက်အဆင်မပြေမှသက်သာရာရစေရန်စံပြဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဦးစွာပူပြင်းတဲ့ရေအင်တုံထဲမှာ 1 /2ခွက်ကို Epsom ဆားထည့်ပါ။
ထို့နောက်တဆယ်နှစ်ဆယ်မှမိနစ်၌သင်တို့၏ခြေဘဝါးစုပ်ယူထားသည်။ သတိပေးချက်: အဆိုပါစည်ပိုင်း၌သင်တို့၏ခြေဘဝါးနှစ်မတိုင်မီအပူချိန်အရေပြားများအတွက်ခံနိုင်သောဖြစ်ပါတယ်သေချာအောင်!
ဤဆောင်းပါးသည်သင်တို့ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားနိုင်: သင်ကခြေထောက်ပေါ် calluses ရှိသည်? ဒီ 100% ကသဘာဝဖြေရှင်းချက်ရှာဖွေတွေ့ရှိ
2 ။ သံလွင်ဆီ
သံလွင်ဆီပုံမှန်အားအချက်အပြုတ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုတဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်သော်လည်း, ဒီရေနံလည်းကုထုံးအကြိုးခံစားခှငျ့ရှိသညျ။ ပြင်ပ application ကြွက်သားအနားယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအစရောင်ရမ်းခြင်းနှင့် tingling ကိုတိုက်ကူညီပေးသည်။
ပထမဦးစွာ, အရေပြားမှလျှောက်ထားရန်သင့်လျော်သောအပူချိန်မှာသံလွင်ဆီ Soul နှစ်ခုဇွန်းအပူ။
ထိုအခါ သင်၏ခြေပေါ်၌ဆီကိုလျှောက်ထားခြင်းနှင့်သင်တို့၏ခြေကို massage: နူးညံ့သိမ်မွေ့မြို့ပတ်ရထားလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ပါ။ ဆယ်မိနစ်ဤသို့ပြုပြီးတော့ငြိမ်ဝပ်စွာနေ။
3 ။ စမုန်ဖြူ
ယင်း၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများမှတဆင့်သို့မဟုတ်တူညီသောစက်ရုံအားဖြင့်ဖြစ်စေ, စမုန်ဖြူအကျိုးရှိသော Anti-inflammatory သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ကြောင်းကိုငါသိ၏။ ထို့ကြောင့်ခြေအတွက်စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းသက်သာရာနိုင်ပါတယ်။
စမုန်ဖြူ, timolol, အဘယ်သူ၏အရေးယူအဆစ်များတွင်နာကျင်မှုလျော့နည်းစေမယ့်ပစ္စည်းဥစ္စာများပါရှိသည် tingling နှင့် လောင်စေခြင်း.
ဆန္ဒရှိပါက, (ငါတို့သည်သင်တို့ကိုငါးထပ်ထည့်ဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်) စမုန်ဖြူ၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီအနည်းငယ်ကျဆင်းလာ add နှင့်သင်တို့၏ခြေကို massage ။
4 ။ ပိုက်ဆန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ
၎င်း၏အရေးပါသောအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူ3Omega-ဖက်တီးအက်ဆစ် နှင့် antioxidants, flaxseed မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံလျင်မြန်စွာတစ်ကုထုံးရေနံထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။
လျှောက်ထားလိမ်း linseed မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ, အာရုံကြောစနစ်၏လှုပ်ရှားမှုထိန်းညှိသွေးစီးဆင်းမှုတိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်းနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းလျော့နည်းစေသည်။
ထိုအခါ ထို့နောက်ဆယ်မိနစ်အဘို့အသင်တို့၏ခြေကို massage, သင်၏လက်ပွတ်ပေးပါ။
5 ။ အအေးနှင့်ရေပူပြောင်း
အပူအပြောင်းအလဲပိုကောင်းတဲ့အရာကြွင်းသမျှမြှင့်တင်ရန်, ကြွက်သားတွေကျုံ့နှင့်အပန်းဖြေဖို့ကူညီပေးပါတယ်။ ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့ကုထုံးတစ်ခုအားကစားလှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်မည်သည့်မြင့်မားပြင်းထန်သောလှုပ်ရှားမှုအပြီးကြွက်သားတွေ, ရွတ်ခြင်းနှင့်အာရုံကြောကောင်းမွန်သည်။
သငျသညျခြေတစ်စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းခံစားရတဲ့အခါ, ရေပူရေအေးတစ်ဝှမ်း၌သင်တို့၏ခြေဘဝါးစုပ်ယူထားသည်။ သုံးမိနစ်ခန့်စောင့်ပါ။
ဤဆောင်းပါးသည်သင်တို့ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားနိုင်: အသစ်ရဲ့ဖိနပ်ထဲမှာအလှနျခွကေိုရတဲ့ရှောင်ရှားရန်5အကြံပေးချက်များ
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ရောဂါလက္ခဏာတွေဆက်လက်သို့မဟုတ်ပိုမိုဆိုးဝါးလာလျှင်မူကား, သင်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးဆရာဝန်တစ်ဦးနှင့်တိုင်ပင်ကြောင်းကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်သင်သည်အခြားရောဂါလက္ခဏာများရှိပါက။
ဤရွေ့ကားကတခြားလက္ခဏာတွေရှိနိုင်ပါသည် အနာခြေထောက်, အလက်ချောင်းများတစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သော sensitivity ကိုမှကိုတိုးချဲ့, ပွင့်လင်းဒဏ်ရာများ, ပြင်းထန်သောမီးလောင် feeling, မီးလောင်သောနာကျင်မှု ....
နှောင့်အယှက်ဖြစ်နိုင်သည့်, အိမ်မှာကုစားနှင့်အတူခြေဖန်းဂတ်စ်ကူးစက်မှုဆက်ဆံဖို့ထိထိရောက်ရောက်ဤပြဿနာကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်လေ့လာပါ။ Read more »
ကျောက်ကပ် function ကိုတိုးတက်စေရန်5အစားအစာများ - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ
ကျန်းမာတဲ့အသားအရေများအတွက်3နနွင်းကုသမှု - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ